သက်တန့်ချို: Generation အပျောက်ခံတော့မှာလား မိအေးရယ်
Posted by သက်တန့်ချို at 2:44 PM
မိန်းမ ရှိတဲ့ singaporian ကိုလက်ထပ် ရင် PR မကျပါဘူး ။
အိမ်ဝယ်ပေး ပိုက်ဆံ ထောက်တယ်ဆိုတာကတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
data အားလုံး ICA က ကွန်ပြူတာနဲ့ ထည့်ထားတာ ဖြစ်လို့ 
မိန်းမ ၂ ယောက် ကို Register of Marraige လုပ်လို့ မရပါဘူး
Just information...Singaporean married men cant marry more than one time legally.
I do not understand your post about getting married singaporean with wife and children to get stay PR. The girl ( Myanmar from your post) can not marry wiht singaporean married man leagally and how can she can apply singapore PR.......
In reality, even the foreginer married to singaporean, Singapore Govt give only long time social visit pass and take time to check fake marraige.
ကိုနော် April 24, 2012 at 6:47 PM
စောင့်လေမျိုးနွယ် ၀တ်ငါးသွယ်ဆိုတာ သားသမီးဝတ်ထဲမှာပါပါတယ် လူတိုင်းလိုက်နာသင့်တဲ့ ကျင့်ဝတ်လေးပါ။ အဖြစ်အပျက်တွေကိုရေးပေးတဲ့ သက်တန့်ချိုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငွေနဲ့ပေါက်လို့ အမျိုးမပျောက်ပါစေနဲ့။
အလွမ်းမြို့ April 24, 2012 at 9:03 PM
ပိုစ့်အစအဆုံး စိတ်ဝင်စားလို့ ၂ ခါပြန်ဖတ်တယ်။
တကယ်ကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ။ တကယ်ရှိလို့ တကယ်ရေ တကယ့်ဖတ်လို့ ကောင်းဘဲ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ
Anonymous April 25, 2012 at 3:09 AM
Asabuddhism, I am strongly against involving with married people and having extra-marital affair.
But I also knowalot of Burmese girls who fell in love and got married properly and grandly with Western Men. Good to see how much they appreciate their family value, support Burmese culture and Buddhism. Most of them brought up their children into Buddhism and in Burmese culture. One boy (half burmese, half english) becamealifelong vegetarian and entered monk hood for the rest of his life since 2006!! and one other burmese-english girl is volunteering in teaching English in Sa-Gaing during her summer holidays every year. How good of them!!
So is it always wrong with falling in love with foreign people??!!
Just some thoughts got into my mind! and I couldn't resist temptation to post this, although i know this' gonna brought upalot of controversy here.
PS I amaBurmese, married to another Burmese. So nothing personal here!!! I neither support nor be against marrying into foreign families, as long as they are single and they marry for love.
ထောက်ခံပါတယ် ..Singaporian ကို လက်ထပ်တာနဲ့ PR မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ....ကိုယ့်ဟာကို ရပ်တည်ပြီး PR ရထားတဲ့ လူပျိူ အပျိူ တွေ SG မှာ အများကြီင်္းရှိပါတယ် ..(ခုလက်ရှိအနေအထားအရသာ သူ့နိုင်ငံက လူဦးရေကန့်သတ်ထားလို့ PR ရဖို့ခက်တာ တစ်ခုထည်းပါ)..SP/ EP holder မှန်သမျှ မည်သူမဆို PR လျှောက်ဖို့ အခွင့်အရးရှိပါတယ်...
Hay Mar ;) April 25, 2012 at 12:28 PM
Food for thought ... :-???
Hay Mar ;) April 25, 2012 at 12:30 PM
That can be fake marriage . But if really got PR, I think they did others way .
thu April 25, 2012 at 3:10 PM
အသိတစ်ယောက်တော့ SINGAPOREAN တစ်ယောက်နဲ့ယူသွားပြီ။
စင်္ကာပူ လူမျိုးတယောက်သည် တကြိမ်မှာ တခါသာ လက်ထပ်ခွင့်ရှိသည်.... လက်ထပ်ခွင့်တင်ပြီး ၃ လကြာမှသာ လက်မှတ်ထိုးခွင့်ရှိသည်.... လက်ထပ်ခွင့်တင်ထားစဉ်... ၃ လ အတွင်း အပြောင်းအလဲ တခုခု ဖြစ်ပါက လက်ထပ်ခွင့်တောင်ခံမှု ရုပ်သိမ်းနိုင်ရန်ဖြစ်သည်.... အိမ်ထောင်လက်ရှိ စင်ကာပူနိုင်ငံသား တယောက်သည် နောက်ထပ် အိမ်ထောင် မပြုနိုင်ပါ.... လက်ရှိအိမ်ထောင်ကို ကွာရှင်း မှသာ နောက်ထပ် တယောက် နှင့် လက်ထပ်နိုင်သည်.....
စင်ကာပူနိုင်ငံသားနှင့် တိတ်တိတ်ပုန်း လက်ထပ်ခွင့် မရှိသောကြောင့် ထိုနိုင်ငံသားနှင့် ပတ်သတ်သော အကျိုးအမြတ် ဘာမှ မရပါ.... PR အဖြစ်သော်လည်ကောင်း နိုင်ငံသား အဖြစ်သော်လည်းကောင်း.... အိမ်ပိုင်ဝယ်ခွင့်သော်လည်းကောင်း မရပါ...
အချုပ်ဆိုရသော် စင်ကာပူနိုင်ငံသားနှင့် တရားဝင် လက်ထပ်ခဲ့ပါက ထိုသူသည် တရားဝင် မယားကြီး သို့မဟုတ် လင်ကြီး ဖြစ်သည်..
တကယ့် လက်တွေ့အမှန်ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ သိအောင် ကော်မန့်အား တင်သင့်ပါသည်
lynnyaungsin May 6, 2012 at 9:36 AM
Unless she married to Malay Muslim, they can marry four wives at the same time.....Other than that can marry one atatime:)